Global Voices teny Malagasy » Misy Mony? Hampandoa Hetra amin’ny Fitsaboanao izany i Korea Atsimo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Novambra 2018 18:26 GMT 1	 · Mpanoratra Lee Yoo Eun Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Korea Atsimo, Fahasalamàna, Fitantanam-pitondrana, Hevitra, Lalàna, Mediam-bahoaka
Iza no manan-jo hanisy hetra ny fipoiran'ny mony eny amin'ny tarehinao? Any Korea Atsimo, afaka manao izany ny minisiteran'ny Fitantanam-bola.
Hampiharina manomboka ny voalohan'ny Febroary ao Korea Atsimo ny rafitra fandoavan-ketra vaovao mametraka hetra 10%  amin'ny fandidiana mifandraika amin'ny endrika. Tafiditra anatin'ity antsoina hoe hetran'ny hatsaràna ity na ny fandidiana endrika tahaka ny orina, ny valanorano roa, ny fanalehibeazana molotra, na ireo fikarakaràna endrika tsotra toy ny fitsaboana mony.
Milaza ilay fandoavan-ketra vaovao tamin'ny fahavaratra farany teo fa hanjaka anatin'ireo fandidiana tarehy mandeha be ao amin'ny firenena izy io, kanefa tsy nalaza mihitsy hatramin'ny fotoana nanolorana azy. Manindry  [ko] (rohy maty) ireo tsikera fa paika hampitomboana ny hetra miditra fotsiny ihany io tetika io amin'ny maha lalàna mikasika ny fahasalamam-bahoaka azy. Nasehon'ireo [ko] mpampiasa aterineto maro fa tsy hahavita isakana ny fitiavan'ny fiarahamonina diso tafahoatra ny bika aman'endrika ary tsy hisy fiantraikany eo amin'ny olona manana ny fahafahana sy tena maniry mafy an'ireo fanao ireo io.
Andro iray mialoha ny fampiharana ilay drafitra, toa namerina namelona ny fanoheran'ny vahoaka ilay volavolan-dalàna ny hetra iray – 10 % amin'ny fitsaboana ireo mony. Ireto ambany ireto misy bitsika vitsivitsy avy amin'ireo mpampiasa aterineto sorena:
Tahaka ny hoe tsy efa ratsy ny fanànana mony sy volo mihintsana. Izao indray koa dia mbola tsy maintsy mandoa hetra noho ny fanànana azy ireo.
Mirenireny ny amboadia, mitady zavatra azo asiana hetra, nahita izany ihany ry zareo ny farany – mony!
Ho an'ny @mosfkorea  [kaonty ofisialin'ny Minisiteran'ny Paikady sy ny Fitantanam-bola]: Fa iza no fiheveranareo ny tenanareo no hanisy hetra ny moniko?
Araka izany dia izao ny fomba fisainan'ny Minisitry ny Paikady sy ny Fitantanam-bola: Koa satria tsy raisin-dry zareo ho aretin-koditra goavana ny mony, voasokajy ho fandidiana “mifandraika amin'ny hatsaràna” izay rehetra mitsabo ny olan'ity mony ity ka hasiana hetra. Efa nampihomehy ny fahenoana ny hetra amin'ny fandidiana endrika dia izao indray! Na inona na inona antony omenareo, azonareo mba hajanona ve ny fanisiana hetra amboniny?
Toa romotra tamin'io vaovao io ihany koa ny vondrompiarahamonin'ny mpitsabo. Nanaparitaka ity petadrindrina eto ambany ity ny Fikambanan'ny Mpitsabo Koreana, manazava ny hasosorany. Itarainan-dry zareo anatin'ny fehezanteny voalohany mivandravandra fa ny minisitry ny fitantanam-bola fa tsy ireo manampahaizana amin'ny fitsaboana velively akory no manao fanapahankevitra manokana ny amin'ny fomba hanakarana ny atao hoe mony – tsy toetry ny hoditra ilaina tsaboina, fa fanelingelenana mifandray amin'ny hatsaràna. Nozarain'ireo mpampiasa Aterineto tao amin'ny Twitter ilay sary ary nanalan-dry zareo ny teny filamatry ny governemanta ankehitriny hoe “Toekarena Hafa Kely”, nanonona ny solonanarana malaza fiantsoana ny Filoha mpitondra, Park Geun-hye, hoe “Akoho” mihitsy aza ny mpampiasa aterineto iray:
Manisy hetra ny mony… Tena “hafa kely” marina.
Tafahoatra kosa ny fampandoavana hetra amboniny amin'ny fitsaboana hoditra. Efa mandoa vola be ireo mararin'ny mony mba hahazoany fitsaboana araka ny tokony ho izy. Ary adolantsento anatin'ny fitomboana avokoa ny ankamaroan'izy ireny na anatin'ny faha-20 taonany. Raha ny fandehany dia midika “fomba hafa kely hanisiana hetra ny zavatra” ny “toekarena hafa kely” an'ny biraom-pitantanan'ny akoho.
Tsy misy firenena toa ny antsika izay itiavan'ny fiarahamonina diso tafahoatra ny endrika amam-bika. Ary manisy hetra amin'ny singa tsirairay manatsara ny bikan'ny olona ireo izay nanampy namolavola ny fiarahamonintsika ho toy izao. Mampihomehy ny zavamisy.
Oao… Hatraiza ny fetra? Ny fampandoavana hetra amin'ny fikarakaràna hoho sy fanenam-batana ve no ho dingana manaraka? Tsy fahotana ny fananana mony vitsivitsy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/22/129617/
 mametraka hetra 10%: http://english.yonhapnews.co.kr/full/2013/11/15/38/1200000000AEN20131115002600320F.html
 Nasehon'ireo : https://twitter.com/Mysticblue1024/status/365360166188752898
 January 28, 2014: https://twitter.com/everyyoga/statuses/428158923653132289
 December 31, 2013: https://twitter.com/lizinhaisenDT/statuses/417827547762933760
 January 22, 2014: https://twitter.com/AccountantInLaw/statuses/425801909073485824
 January 22, 2014: https://twitter.com/nonno_okama/statuses/425980479762735104
 January 22, 2014: https://twitter.com/darkrunar/statuses/425929395354607616
 January 23, 2014: https://twitter.com/DarlTea/statuses/426441238120636416
 January 22, 2014: https://twitter.com/nonno_okama/statuses/425981679195271168
 January 21, 2014: https://twitter.com/dino_quality/statuses/425597097241346049